Injere infrared sensor: kuvhenekera chete kana iwe uchizoida, sunungura maoko ako, vhura uye uvhare nekutambanudza iwo
Zvipikiri uye epidermal forceps, ine rakakombama blade ukobvu, inogona kutema iyo epidermis uye rakafa ganda reruoko, uye inogona nyore kudimbura nekuchenesa mativi ayo asiri nyore kutetepa, senge nzara maburi.
Ruvara kugadzirisa, kudhinda LOGO, kugadzirwa kweforoma, kusarudzwa kwezvinhu, yemahara dhizaini
GEL POLISH 5 Matanho ekushongedza zvigunwe zvako uye Kuda Chipikiri Chako mafuta glue kunzvenga matambudziko anotevera: bvisa, kwete nyore kuomesa, kusimba kusimba, ruvara rwacho hachisi izvo Zvishandiso 01. inobviswa inonamira BASE COAT Kuramba kusabvisa Nyore kusvika yakasununguka Inoshandiswa pamberi peruvara rweglue, kudzivirira zvipikiri kubva pakutsvukirira, kubvarura uye kumonana, zvinobudirira kuwedzera kusimba uye inogara nguva. Ive neshuwa yekupurisha nzara dzako kusvika pasisina nzvimbo dzinoonekera. Iyo yepamusoro mushure mechiedza inonamira uye in ...
Mawigi mushure mekuwacha, anofanirwa kudzivirira zuva rakananga, mumhepo inofefetera kusvika pa7 kuita yakaoma, pfapfaidza wigi yakakosha yekuyamwisa fluid, shandisa zvakare muzinga wesimbi zvinyoro nyoro.
Iyo mambure chivharo chakagadzirwa neruoko-rwakakoshwa uye rwakagadzirwa michina, yakajeka, yakatetepa uye inofema.
Huru yegiredhi bvudzi rinouya kubva kunzvimbo yepasi latitude, vhudzi revanhu vakasiyana rinogadzirwa nemuchina uri padhuze nemusoro uye wova, hupfumi chokwadi chinotambura ne, kupera fade yepamusoro inosvika 6 degrees.
Sweat yekumwa basa, iyo mambure cap ine mashandiro ehydrophilic mvura yekumwa, inofema uye inotonhorera, uye zvakare ine ine ganda-inoshamwaridza basa.